Tattoo my Photo 2.0 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Tattoo my Photo 2.0
"Tattoo my Photo" အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အားနာကျင်မှုမရှိဘဲတက်တူးဒီဇိုင်းအသစ်များကိုစမ်းသုံးခွင့်ပြုသည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတုပပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တက်တူးထိုးခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံတဲအိမ်တွင်ခံစားရမည်။ ပြခန်းမှပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုသုံးပါ၊ သင်၏စတိုင်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အပြင်လှည့်၊ အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဝေမျှခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမှင်တက်တူးဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကမင်းကိုတကယ်ကိုတက်တူးထိုးထားပြီလို့ထင်ပါစေ။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာတွင်ကလေးများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်အနုပညာတက်တူးထိုးအတွေးအခေါ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်တက်တူးများ (ဥပမာ - နှင်းဆီ၊ နဂါး၊ ပိုလီနီးရှားသို့မဟုတ် လူမျိုးစုတက်တူးနှင့်ပိုပြီး!) ။
သတိရပါ၊ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မှင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဂိမ်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်သင်၏အရေပြားပေါ်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာတွင်မည်သို့ကြည့်မည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများအရတက်တူးထိုးထားသောအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်အခြားသူများကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကဒီသက်ရောက်မှုကိုဓာတ်ပုံတွေကပဲရနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ရလဒ်ကတော့တက်တူးတုအတုနဲ့မတူဘူး၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ မကြိုးစားပါနဲ့။
ဗားရှင်းသစ်တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စာသားတက်တူးကိုထည့်နိုင်သည်။ ဖောင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးစာသားကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဗားရှင်းအသစ်ကသင့်အားတစ်နေ့တာ၏ tatts များကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီတစ်နေ့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်တက်တူးထိုးစိတ်ကူးများအပိုင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယခုသင်သည်အခြားလူများထံမှစစ်မှန်သောပုံများကိုစစ်ဆေးပြီးပြခန်း၏လူမှုရေးအပိုင်းသို့သင်ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဝေပါသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုရှာပါ။ ကင်မရာ (သို့) ပြခန်းမှဓာတ်ပုံ၊ အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (tatts အသစ်များထပ်ထည့်ရန် (အဆင်သင့်သောအမျိုးအစားများမှရွေးချယ်ပါ)), - - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တက်တူးထိုးဖယောင်းစက္ကူများကိုအကောင်းဆုံးနေရာတွင်ထားပါ။ အမှတ်အသားများကိုရွှေ့, အလှည့်, အရွယ်အစားနှင့်အကောင်းဆုံးကိုက်ညီဖို့တည်းဖြတ်, - - မလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖျက်ပစ်,
- သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံထဲသို့အခြားမှင်ထည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်သင်အလွှာများနှင့်အပြင်အဆင်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ element ကိုရွေးပါ။ ဘယ်ဘက်မှာ layout တစ်ခုထပ်ရှိတယ်။ ဤနေရာတွင်သင်တက်တူးထိုးခြင်း၊ လှန်ခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းများပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး - ရလဒ်ပုံကိုသိမ်း။ မျှဝေနိုင်သည်။ - ကျွန်ုပ်တို့၏ simulator ပြခန်းတွင်သင့်အက်ပလီကေးရှင်းမှသင်ဖန်တီးထားသောသင်၏ကိုယ်ပိုင်လှပသည့်ကိုယ်ခန္ဓာအနုပညာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ။
ဗားရှင်းသစ်တွင်သင်သည်အမြင့်၊ တက်တူးနှင့်အကျယ်ကိုပြောင်း။ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အများကြီးပိုမကြာမီ!
ဘာအသစ်လဲ Tattoo my Photo 2.0 3.1.13
TATTOO MY PHOTO 🔥
Navin K Minds
Tatto Editing Tutorial // Perfect Quality 💯👌 // Easy Trick // 🔥🔥
Hnin Tame Hlwar